warkii.com » Da’yarkii Kooxaha Waaweyn Ku Dagaallamayeen Oo Tijaabada Caafimaadka U Maray Naadiga Mucjisada Ku Ah Kobcinta Da’yarta
Da’yarkii Kooxaha Waaweyn Ku Dagaallamayeen Oo Tijaabada Caafimaadka U Maray Naadiga Mucjisada Ku Ah Kobcinta Da’yarta
Da’yarka cajiibka ah ee Jude Bellingham ayaa ugu dambayn lagu kala adkaaday, waxaanu tijaabada caafimaadka u maray kooxda reer Germany ee Borussia Dortmund oo kala wareegtay Birmingham City.
17 jirkan mucjisada ah ee khadka dhexe oo ay ku tartamayeen kooxaha ugu waaweyn Ingiriiska ee Manchester United, Chelsea, Arsenal, Man City iyo xattaa Liverpool ayaa waxa si cajiib ah ugu garaacday Bourissia Dortmund oo ka bixisay lacag dhan £26 milyan oo Gini, taas oo qayb ka mid ah ay ku xidhnaan doonto bandhig ciyaareedkiisa.
Bellingham ayaa subaxnimadii Khamiista ka duulay garoonka diyaaradaha ee Birmingham, waxaanu qaatay diyaarad khaas ah oo uu ku tegay Germany, waxaanu si toos ah markiiba u maray tijaabada caafimaadka iyadoo aan la gelinin karantiil.
Da’yarkan iyo kooxdiisa ayaa ka faa’iidaystay xidhiidhka Germany iyo UK ee ah in aan karantiil la gelinin dadka u kala safraya, laakiin waxay Dortmund ka qarisay inay warbaahinta usoo bandhigto.
Garoonka diyaaradaha ayay ku sugayeen afar baabuur oo diyaaradda hoosteeda taagnaa, waxaana si dhuumasho ah loogu qaaday mid ka mid ah baabuurtaas, iyadoo layaab ay ahayd qaabka baabuurtu uga baxeen garoonka diyaaradaha oo mid walba uu jiho gooni ah u dhaqaaqay, si aanay warbaahintu usoo helin.
Kooxda horyaalka Bundesliga ayaa ka tallaabo horreysay kooxaha ugu waaweyn Yurub ee tartanka ugu jiray laacibkan, kuwaas oo ay ka mid yihiin Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Man City iyo kooxo kale.
Arrinta ka caawisay Dortmund saxeexa da’yarkan ayaa la sheegay inay tahay, Jude Bellingham oo isagu doortay kooxdan iyadoo uu raadraac uga dhigtay qaabka ay ciyaartoyda da’da yar fursadda u siiyaan gaar ahaan sannadihii ugu dambeeyey oo ay dunida kaga yaabsadeen laacibiin badan.